Key Metrics nke nchịkọta maka Inbound Marketing | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 24, 2015 Tọzdee, Disemba 24, 2015 Douglas Karr
Ọbụna ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na-agbaso usoro nsuso. Enwere m ihe karịrị afọ iri nchịkọta na-ewepụta ọtụtụ ajụjụ karịa ka ọ na-aza dị ka ndị ọrụ na-ekewapụ, nzacha, ma na-enyocha okporo ụzọ. Ikpokọta na eziokwu na ihe karịrị ọkara nke gị niile nchịkọta Enwere ike ịmepụta okporo ụzọ site na bọọlụ, ma hapụrụ gị ịpị isi gị ọtụtụ oge.
Mojo Media Labs emepụtala ihe omuma a, Ntuziaka Inbound Marketer na Data & Nchịkọta. Ọ na-enye usoro nke mgbagwoju anya yana nduzi na ọnụọgụ ụzọ ọ bụla maka azụmaahịa inbound yana oge ole ịlele usoro ọ bụla.
Daily - gụnyere nleta, ndị ndu, ndị ahịa, onye ọbịa na-eduga ọnụego ntụgharị, afọ na-aga n'ihu n'afọ, na-eduga na ọnụego mgbanwe ndị ahịa, yana ihe atụ benchmark maka nke ọ bụla.
Ugboro abụọ na atọ kwa izu - nyochaa isi mmalite okporo ụzọ, nleta site na isi iyi okporo ụzọ, ụzọ na ntụgharị site na isi mmalite yana kwa afọ na afọ na mgbanwe na ntụnyere benchmark.
Ugboro abụọ na atọ kwa ọnwa - nyochaa data granular n'ime isi mmalite okporo ụzọ ọ bụla, njiri mara na omume, yana afọ na-aga n'ihu na ntụnyere ntụpọ.
Ugboro abụọ na atọ kwa ọnwa - nyochaa Keywords, peeji nke ọdịda, metrik email, ịrụ ọrụ ịkpọ oku, ndị na-elekọta mmadụ, ndị na-elekọta mmadụ na mbak, blog nchịkọta, na njikọ inbound, na njikarịcha ọchụchọ.
Otu ndụmọdụ ga-enyere gị aka bụ ịrụ ọrụ azụ. Ieslọ ọrụ na-emeghekarị nchịkọta ma bido n’onye na-eleta ibe ya. Kama, mepee nchịkọta ma lelee mgbanwe gị, wee jiri akwa ntugharị gị, wee rụọ ọrụ laghachi na ibe na ntughari. Nke a ga - enyere gị aka ilekwasị anya na ọnụọgụ ọnụọgụ nke na - ebugharị azụmaahịa karịa mgbagwoju anya na ọnụọgụ nke nwere ike enweghị isi.
Tags: Analyticsnchịkọta nyochaAttributionnchịkọta blogịrụ-ime-arụmọrụ arụmọrụntụgharị ntụgharịarụmọrụ ctaahịacyear afọ na-agaemail metriknjikọ inboundmetrik isiKeywordsọdịda pagendu-ahịaedumetricselekọta mmadụ na-esoelekọta mmadụmmekọrịta mmadụ na ibe yaokporo ụzọomume obiaesenowo-to-ndunletanleta site na isi mmalite okporo ụzọ